Mogadishu Journal » Zinedine Zidane ayaa siinayaa Jawaab celin adag Gareth Bale
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa looga carooday su’aal kale oo la xiriirtay habdhaqanka Gareth Bale ee dhawaanahan, isaga oo ku dhaleeceeyay warbaahinta iyagoo isku dayaya inay dhibaato abuuraan wax aan jirin.
Bale ayaa ciyaaray kaliya labo jeer tan iyo markii uu soo laabtay kubada cagta, laakiin weli wuxuu ku guuleystey inuu xado maqaallada cinwaankiisa ah oo uu ka sheekeysto. Xiddiga reer Wales ayaa wejiga wejiga u adeegsaday inuu seexdo hurdo yar oo garoonka ah ka hor intaanu dhisin boodhadhka canqowga isagoo isticmaalaya cajalad canqawga ah markii ugu dambeysay.
Qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Isbaanishka ayaa ku weeraray Bale akhlaaqdiisa 'ixtiraamdarro', waxaana la weydiiyay Zidane inuu dareemayo inuu garabka si ulakac ah dhibaato u yahay, laakiin macalinka ayaa mar kale ku adkeystay (isaga oo adeegsanaya Sky Sports) inaysan jirin wax u dhexeeya Bale iyo Naftiisa
"Ilaahayow, waa maxay su'aal, nin!" wuxuu yidhi. Waxaan ka fikirnaa kulanka berri, iyo Gareth oo isku mid ah. Isaga ayaa naga mid ah Maalin kasta waxaad weydiisanaysaa isku mid. Waad sameyn kartaa, waxaad xaq u leedahay inaad weydiisato, laakiin qof walba oo halkan jooga waa mid mideysan. Dhamaanteen waxaan isku fikir nahay si isku mid ah, Gareth, James (Rodríguez), qof walba oo halkaan jooga. Dhamaanteen waxaan dooneynaa isku mid. Zidane wuxuu qaatay mowqifkaas markasta oo wax laga weydiiyay Bale, wuxuuna si cad ugu hanjabay inuu ka fogaado wax walbo oo ka dhex dhici kara labadan nin, laakiin waa iska cadahay in wiilka reer Wales uusan kasoo muuqan qorshihiisa muddada dheer.